Tuug Paris ka xaday dahab qiimihiisu malaayiin doolar yahay - Worldnews.com
Tuug hubaysan ayaa dukaan ku yaalla hoteelka Ritz ee magaalada Paris ka dhacay dahab lagu qiyaasay malaayiin doolar.
Shan nin oo hubaysan oo wata faasas ayaa jajabiyay daaqadaha dukaanka oo ku yaalla huteelka gudahiisa sida ay ku warrantay warbaahinta gudaha.
Saddex nin ayaa la qabtay, sida ay
Booliiska Faransiiska oo la tagay madaxweynihii hore Sarkozy
Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa loo sii qaaday saldhig booliis si su'aalo looga waydiiyo eedaymo sheegaya in uu dhaqaale uu ku ol'olaystay ka qaatay...
Macron oo Trump "ku qanciyay" in ciidammada Maraykanku aysii joogaan Suuriya
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump "ku qanciyay" in uusan ciidammada kala bixin Suuriya taas badalkeedana uu...
Tareen iyo bas iskuul ayaa isku dhacay iyaga oo maraya Perpignan oo ku taalla Koonfurta Faransiiska, ugu yaraan afar carruur ah ayaa ku dhimatay kuwo kale oo badanna...
Siddeed ruux ayaa ku dhaawacan tahay toogasho ka dhacday bannaanka masaajid ku yaalla koonfurta Faransiiska, sida ay saraakiishu sheegeen. Labo nin oo hub wadata ayaa...
Haweeney 86 jir ah oo loo xiray tuugannimo ay caadeysatay
Haweeney 86 sano jir ah oo ku caanbaxday xatooyada waxyaabaha dumarku xirtaan ee sida dahabka oo kale ayaa markale loo maxkamadeeyay xatooyo. Haweenaydan oo lagu magacaabo...
Markii qof ka shaqaynaya tareen dheereeya oo marayay Koonfurta Faransiiska uu suuliga ka maqlay erayada "qori" iyo "hub" oo af Ingiriis ah wuxuu is yiri balaayo ayaa dhici doonta. Arrintan ayaa ku soo aaday maalin uun ka dib markii magaalada Paris lagu fashiliyay weerar la qorshaynayay. Xaaladda oo aad u kacsan ayayna booliisku tareenka ka soo galeen boosteejada Valence Laakiin...
Burcad diyaarad kaga baxsaday xabsi Paris ku yaalla
Nin burcad wayn ah ayaa baxsad ah ka dib markii uu diyaarad kuwa qumaatiga ah kaga baxsaday xasbi ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Redoine Faid waxaa gacan siiyay saddex nin oo aad u hubaysan. Labo nin oo hubaysan oo wajiga soo qarsaday ayaa adeegsaday bambooyin qiiq ah iyo mashiinada wax lagu gooyo iyaga oo u dhacay qolka booqasha oo Faid uu kula hadlayay...
Booliiska Faransiiska ayaa sheegay in ay dib u heleen sanduuq yar oo dahab ah oo la sheegay in lagu kaydiyay xubinta jirka ee wadnaha oo ay lahayd boqorad Faransiis ah oo noolayd qarnigii 16-aad. Boqoradan ayaa lagu magacaabayay Anne, waxaana sheygaan qaaliga ah laga xaday madxaf ku yaala dalkaas. Booliiska ayaa qabtay labo nin oo la tuhunsanaa, kadibna waxa ay u horseedeen...
Pakistan: Dab dad badan ku laayay huteel ay dadka ladan dagaan
Ugu yaraan 11 ruux ayaa dhimatay ka dib markii uu dab ka kacay huteel ay dadka ladan dagaan oo ku yaalla magaalada Karachi, ee dalka Pakistan. Dabka ayaa ka billawday jiko ku taalla qaybta hoose ee hotaalka Regent Plaza, ka hor inta uusan ku fidin dhismaha qaybihiisa kale sida ay ku waramayaan warbaahinta guduhu. In kabadan 70 ruux ayaa ku dhaawacantay ka dib markii uu dabku...